Regolith: Deegaan Casri ah oo shaqeynaya oo ku saleysan i3wm | Laga soo bilaabo Linux
Regolith: Deegaan Casri ah oo shaqeynaya Desktop kuna saleysan i3wm
Maanta, sidii caadiga ahayd iyo xilliyadiiba, waxaan dib u eegi doonnaa mid kale oo badan Deegaanka Desktop (DEs) jira. Maanta waxaan la kulmi doonnaa oo aan ka hadli doonnaa DE kale, oo cusub oo la socda indhaha soo jiita iyo dhinacyada xiisaha leh, magacaa Regolith.
Regolith sida «Desktop Environment»Waxyaabaha xiisaha leh ee badan ee ay leedahay oo laga odhan karo, waxaa ka mid ah in la dhisay iyadoo la adeegsanayo isku-dhaf qurux badan oo shaqeynaya I3wm iyo Gnome. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku timid rakibitaan ahaan, a Linux Distro oo leh isla magac, kuna saleysan Ubuntu, iyo yaa ugu dambeeya nooca xasiloon waa 1.5.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan guda gelin arrinta ah Regolith, waxaan u daynaynaa xiriiriyeyaal qaarkood qoraaladeennii hore ee la xiriiray kii hore Degaanada Desktop, halkaas oo ay ku ballaarin karaan aqoontooda ku saabsan: Saddexmidnimada, Moksha, Deegaanka Deepin Desktop ama DDE, Pantheon, Budgie Desktop, GNOME, KDE Plasma, XFCE, Qoraxda, MATE, Lxde y LXQT.
1.1 Waa maxay Regoliht?
Waa maxay Regoliht?
Sida laga soo xigtay Websaytka rasmiga ah ee 'Regolith Project', waxaa lagu sifeeyaa:
"Regolith waa jawi casri ah oo loo yaqaan 'desktop desktop' oo loogu talagalay inaad si dhakhso leh ugu shaqeyn karto adoo yareynaya buuqa iyo xafladaha aan loo baahnayn. Lagu sameeyay Ubuntu, GNOME, iyo i3, Regolith wuxuu ku tiirsan yahay aasaas wanaagsan oo joogto ah".
Intaa waxaa dheer, waxay si faahfaahsan ugu taxan yihiin waxyaabaha soo socda muuqaalada iyo functionalities isku mid ah:
A Desktop Environmental minimalist leh isdhexgal adeegsade shaqeynaya, kaas oo u oggolaanaya wax-ka-beddelka fudud iyo ballaarinta qaybo badan oo ka mid ah cunsurradeeda. Dhammaantiisna waxay ku mahadsan tahay isku dheelitirnaanteeda wanaagsan ee isku dhafka astaamaha maamulka nidaamka GNOME iyo hawlgalka wax soo saarka ee i3-wm.
Jawi shaqo loo habeeyay isticmaalka fudud iyo barashada isticmaaleyaasha cusub, iyada oo ay ugu wacan tahay isku xirkeeda ku saleysan Maareeyaha Daaqada ee nooca "Tiling Window Manager".
GUI way fududahay in la habeeyo lana hagaajiyo iyada oo loo marayo qaabeynta Xresource joogto ah.
Isdhexgal aad u fiican oo Linux Ubuntu Distro ah, oo u oggolaanaya isticmaalka App Store iyo keydkiisa xirmooyinka. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu rakibi karaa si madax-bannaan GNU / Linux Distros kale oo laga soo qaatay ama la jaan qaadaya Ubuntu.
Horumar heer sare ah oo casriyeyn ah oo u oggolaanaya wax ka beddelka fudud ee adeegsigiisa 'User Interface' (UI), iyo noocyada kala duwan ee aadka u fiican ee lagu dhex-geliyo gaagaabannada kumbuyuutarka Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa qoraal dhisid iyo xirmo metadata, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u foorarsato iyo Qaybinta ku jirta.
Tan iyo markii, uu websaydhka rasmiga ahi waa luqado badan waxayna ku timaaddaa mid dhammaystiran Luqadda Isbaanishka, waxaad si fudud ugu heli kartaa dhammaan waxyaabaha la cusbooneysiiyay ee shaashadaha shaashadaha (shaashadaha shaashadda), dukumiintiyada (hagayaasha / buugaagta), ilaha (soo degsashada noocyada jira), iyo macluumaad kale oo qiimo leh.
Sidaan hore u sheegnay, Regolith waxay ku timaadaa si caadi ah a Linux distro ku saleysan Ubuntu, si kastaba ha noqotee, laga bilaabo iyada Meelaha lagu keydiyo GitHub waa la soo ururin karaa iyadoo la adeegsanayo amarka debuild waxaa bixiyay xirmada devscripts ama iyaga loo maro Keydadka PPA ee LaunchPad.
Xaaladda dambe, iyo sida ku xusan xiriirka, talaabooyinka la raacayo waa:
Ku saabsan Ubuntu iyo noocyada kala duwan
Nota: Waxaad ereyga "xasilloon" ugu beddeli kartaa "sii deyn".
Ku saabsan Debian iyo noocyada kala duwan
Abuur ilaha softiweerka (keydka) faylka oo geli khadka soo socda:
Nota: Waxaad ku badali kartaa erayga "groovy" oo ah: focal, eoan iyo bionic, iyadoo loo eegayo sida kuugu habboon iyo / ama baahidaada.
Fuli amarrada amarrada soo socda:
Nota: Ka taxaddar inaadan horay u sii rakibin ama i3wm ni i3wm-nusqaamahaHaddii ay lagama maarmaan tahay ka saar wax walba kahor intaadan rakibin, si aad uga fogaato dhibaatooyinka sababa khilaafaadka ku tiirsanaanta ama kuwa kale.
Iyo labada xaaladoodba, taasi waa, adeegsiga Ubuntu iyo deriska o Debian iyo noocyo kala duwan, waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa wax kasta oo kale oo ka mid ah baakadaha jira kaydinta la sheegay si loogu kabo xirmooyinka asalka ah Regolith.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Regolith», mid kale oo yar oo la yaqaan, yar oo dhakhso ah Deegaanka Desktop (DE) oo ku saleysan I3wm iyo Gnome, kaas oo sidoo kale ku yimaada asal ahaan, a GNU / Linux Distro u gaar ah oo ku saleysan Ubuntu, isla magacaas Regolith Linux; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Regolith: Deegaan Casri ah oo shaqeynaya Desktop kuna saleysan i3wm
Codsiyada KDE 20.12 horey ayaa loo sii daayay kuwana waa warkiisa
CentOS 8.3 horey ayaa loo sii daayay aasaasaha CentOS wuxuu bilaabay horumarinta Rocky Linux